Automotive Parts Nkedo
Electric Parts Nkedo
Medical Plastic Ọgwụ
Pipe Dabara Adaba Nkedo
Plastic Cap Nkedo
Otu Kwụsị Plastic Ọgwụ akpụzi na Manufacturing Service
Chinese Best Plastic akpụzi Manufacturer (CBPMM) bụ a na-eduga Chinese ụlọ ọrụ ọkachamara na ubi nke plastic injection ebu na n'ichepụta ọrụ. Anyị e n'afọ 2003 na anyị arụmọrụ dabeere nke Shanghai, China. Anyị na-eso na nlezianya quality usoro na arụmọrụ ụkpụrụ nke ime ka anyị na otu nke kasị mma na-eduga quality na enye ọrụ na China.
Image Box ederede
CBPMM agbaso mba àgwà ụkpụrụ na nwere ISO 9001: 2005 asambodo nke bụ indicative anyị àgwà obi ike.
Anyị na-enye dịgasị iche iche na ngwaahịa na ahịa nke na-agụnye plastic injection ịkpụzi, akpakanamde ịkpụzi, plastic ebu Ndinam, karama okpu ịkpụzi, electronic ebu Ndinam, anwụ na ndọtị, home ngwa ebu, ọgwụ ebu Ndinam, na anwụrụ ebu Ndinam.
Anyị na-eji ọhụrụ na ala-nke-na-art ígwè na mmepụta Filiks iji hụ na kacha mma ngwaahịa maka anyị kpọrọ ahịa. CBPMM nwere ike Nlụpụta ngwaahịa n'ihi na ihe ụfọdụ ndị ahịa na-achọ ma nwere ike nweta ya nye ha ngwa ngwa.
We take pride in our highly qualified, trained, and efficient workforce. We are capacitated to meet the quotas within 24 hours and can provide the sample of the plastic mold to the customers within 3-5 ụbọchị .
The otu nke ndị ọkachamara na CBPMM na ukwuu zụrụ azụ na enweta ezigbo competencies ịghọta chọrọ nke ndị ahịa na ubi nke plastic injection ịkpụzi na-enweta ya nye n'ime izu abụọ.
The ahịa pụrụ ịdabere na anyị ahụkebe arụ ọrụ ego izute ha ahaziri iji n'ime ndị kwuru n'obi imecha.
Anyị na-aghọta na iwu na price sensitiveness nke plastic ebu n'ichepụta ụlọ ọrụ na dị ka a N'ihi ya, anyị ego anyị na ngwaahịa competitively. Anyị kwenyere na-enye elu-edu ngwaahịa ahịa anyị na ihe ezi uche ahịa iwu na-echekwa na-okwu mmekọrịta ha. Nanị sales na-adịghị anyị mkpa ebumnobi, kama anyị na-elekwasị anya na-enye a n'oge na eme ahịa ọrụ.
CBPMM-agba mbọ ka huu ahịa afọ ojuju nke ga-enyere anyị na-ejigide na-eto eto anyị ahịa isi.
Automotive Parts akpụzi
Medical Part akpụzi
Anwụrụ Dabara Adaba akpụzi
Ekpuchighị Cap Nkedo
Home Ngwa Nkedo
Motorcycle Parts Nkedo
Original Factory Ahịa
The plastic ebu n'ichepụta ụlọ ọrụ ukwuu ahịa mmetụta ọsọ ọsọ. Ịnye ọnụahịa bụ isi ekpebi maka akpali ndị ahịa si zuo mkpebi. Anyị na-aghọta ụlọ ọrụ ndị a Ọnọdụ, na ike nke ịnye ọnụahịa ma si otú anyị na-enye ihe kasị mma ahịa na ahịa.
Anyị na-enye ha na mbụ factory ahịa nke bụ ihe asọmpi karịa asọmpi. Ọ bụghị naanị na na-anyị ngwaahịa nnọọ competitively ọnụ, ma ha nwekwara nke nnọọ elu mma. Nke a na-emepụta ihe ezigbo Nchikota nke elu-edu ngwaahịa ọnụ na nnọọ asọmpi ahịa nke na-enyere anyị ọdịiche dị anyị onwe anyị na mpi.
Anyị ịnye ọnụahịa na-eme ka anyị na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa na-enyere anyị aka ịnọ n'ihu nke asọmpi.
State-nke na-Art Machinery
CBPMM eji ọhụrụ na ndị ala-nke-na-art ígwè na mmepụta usoro. The ngwá ọrụ ọgbara ọhụrụ mee ana achi achi àgwà nke anyị na. Anyị na-eji elu ígwè dị ka elu-ọsọ-egwe ọka, na ise-axis machining center, electric orùrù machining, CNC osise na-egwe ọka igwe, egbe-egwu wdg
Anyị ọhụrụ ígwè na ukwuu elu na oru oma na emeputa usoro ekwe ka anyị na-emepụta àgwà ngwaahịa na a ukwuu ngwa ngwa ọnụego . Anyị ji onwe anyị na-enye sample plastic Ebu ahịa anyị na 3-5 ụbọchị na nzute ikpeazụ deliveries nke ngwaahịa na izu 2.
Anyị elu mmepụta usoro-enyere anyị aka n'ihu nke mpi na a ukwuu asọmpi ụlọ ọrụ.
Ịbụ otu n'ime ndị na-eduga plastic ebu emepụta na China, CBPMM nwere a iche iche ma reputed ahịa isi. Anyị na-e tụkwasịrị obi site Chinese ahịa ma zuru ụwa ọnụ ahịa.
Ụfọdụ n'ime anyị kpọrọ ahịa na-agụnye Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, General Motors, Ford, Audi, Volkswagen wdg Site anyị na àgwà ngwaahịa àjà, mpi ịnye ọnụahịa, magburu onwe ya mgbe-sales ije ozi, na a ahịa-centric na obibia, anyị wuru a aha na aha nke onwe anyị.
Anyị na ahịa na-ekweta nke a na-na-e gosiri okwukwe ha na anyị, nke bụ immensely na-eju afọ maka anyị. Anyị zutere anyị ahịa chọrọ na a nyere ihe ndabere karịrị afọ nke mere na ha na-anọgide na-eme azụmahịa na anyị.
Dịgasị iche iche nke Nkedo Service
CBPMM enye a dịgasị iche iche nke plastic injection ebu ọrụ ya ahịa. Anyị na-enye ọrụ ka plastic injection ịkpụzi, akpakanamde ịkpụzi, plastic ebu Ndinam, karama okpu ịkpụzi, electronic ebu Ndinam, anwụ nēfe wdg
Anyị na-enye pụrụ ịdabere na ọrụ na-Nlụpụta ukwuu kpọmkwem na-agbanwe agbanwe mmiri na a ukwuu ezi uche price.
N'okpuru plastic injection ịkpụzi, anyị na-enye dị iche iche ọrụ dị ka thermoplastic injection ịkpụzi, n'elu ịkpụzi, oyi na-agba ọsọ injection ịkpụzi, na-ekpo ọkụ na-agba ọsọ injection ịkpụzi wdg
Nwetara Sales Managers
The sales oru na CBPMM bụ ukwuu ruru eru na amacha ịghọta na ndị ahịa na-achọ ma napụta àgwà ngwaahịa nke izute ha chọrọ.
Anyị na-chụpụrụ site ebumnobi nke etinye na ahịa na isi nke anyị azụmahịa. Anyị ahịa oru na- ọma mụtakwa na English na ike na-ekwu okwu ọma na ndị ahịa na English.
Nke a na-enye ndị ahịa na ala na-ekwurịta okwu n'asụsụ ha na anyị. Ọ na-enyere anyị aka iru eru ka a wider ahịa isi na ịrụzi ha na a irè karị n'ụzọ si otú huu irè na-adọ na-ejere ndị ahịa na ha họọrọ asụsụ.
Great Mgbe Sales Service
CBPMM mgbe a ahịa-centric ụlọ ọrụ. Ihe mgbaru ọsọ anyị na-abụghị nanị na-ere ngwaahịa ndị ahịa, kama inye unmatched mgbe sales ọrụ ha nwekwara.
Anyị kweere na-emepe emepe na-azụlite ogologo oge mmekọrịta na ahịa anyị nke mere na ha na-alaghachi anyị maka ha plastic ebu n'ichepụta chọrọ.
Anyị mgbe sales otu na-enye a n'oge na mgbanwe na ọrụ na ndị ahịa na ihe ọ bụla ngwaahịa ma ọ bụ metụtara gbara ajụjụ nke ha nwere mgbe ịzụta anyị ngwaahịa. Anyị na-agbalị inye a zuru ezu na mbara mgbe-sales ozi ahịa anyị mere na ha nwere a zuru ezu udo nke uche mgbe ha na-azụ anyị na.